Baadi-goobka Saliida Somaliland Muxuu wargayska Dagens Næringsliv-Oslo ka qoray shalay? | WWW.SOMALILAND.NO
Baadi-goobka Saliida Somaliland Muxuu wargayska Dagens Næringsliv-Oslo ka qoray shalay?
Posted on Febraayo 10, 2008 by Abdirisak Fadal
Oslo(somaliland.no) Wargeyska qaadaa dhiga arimaha dhaqaalaha iyo ganacsiga(Dagens Næringsliv) kana soo baxa Oslo Norway. Ayaa saaka(09.02.08) qorey maqaal uu cinwaan uga dhigay “Ka Baadi-goob Saliid Afrika”. Waxa maqaalka ku dul sawirnaa khariidadda Somaliland iyo ta Uganda oo ka dhex muuqda khariidadda qaaradda Afrika iyo sawir weyn oo uu leeyahay maalqabeenka caanka ah Kjell Inge Rokke.
Wargeysku wuxu warkiisa ku bilaabay shirkadda ”Asante Oil” oo ah shirkad saamiley ah, 40%-tana uu leeyahay maalqabeenka Kjell Inge Rokke oo leh shirkadda weyn ee Aker ASA. Ayaa dhowaan shidaal baadhis ka bilaabi doonta Bariga Afrika. Ka dib markii ay dhowaan saxiixday heshiis baadhis shidaal.
Waxa kaloo wargeyku qorey in shirkadu ka caawin doonto dhisida kaabayaasha dhaqaalaha goobaha saliid baadhistu ka socoto, si ay waxtar ugu noqoto dadka degaankaa degan.
Mar aan arintaa wax ka weydiiyey Danjiraha SL u joogga Norway Mudane Maxamed Maxamuud Aadan ”Liilan” wuxu iigu jawaabay: Warkan wargeysku qorey waa midhihii ka soo baxay wadahadalo u socday dawladda SL iyo Kambaniga, waana bushaaro aan ku koobneyn somaliland oo qudha ee gaadheysa dadka Bariga Afrika ku dhaqan oo dhan.
Waxan si weyn u soo dhaweynayaa maalqabeenka Kjell Inge iyo maalqabeenada kaleba, kuwaasoo go´aansaday in saliida loo filayo Somaliland ay maalgashadaan. Arintanina waxay sii xoojineysaa xidhiidhka sokeeye ee u dhaxeeya SL iyo Norway.
Waxaanay ina tuseysaa in Norway safka hore kaga jirto soo dhaweynta nabadda iyo dimuqraadiyadda ka jirta Somaliland. Si gaar ah waxan u tirsanayaa haddaan ahay danjiraha SL ee Norway in arintani u tahay waxqabad xafiiska aan madaxda ka ahay.
Warkani wuxu soo baxay laba habeen uun ka dib soo noqoshadii danjiraha iyo weftigii uu hogaaminayey oo ay ka mid ahaayeen wakiilo ka socday shirkaddan maanta warka soo saartay.
« Laba nin oo ingiriis ah oo lagu qabtay 50 kiloo oo jaad ah -Waa in aynu burburinaa inta ay socod baradka yihiin »